MYUTSAWMYIT : စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသတင်း: ကလေးဖျက်ချခွင့် ဥပဒေ မရှိပဲ၊ ရိုဟင်ဂျာ ကလေးနှစ်ယောက် အစီအစဉ် ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ?
တရုတ်ပြည်မှာက တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ဥပဒေ ပြဠာန်းပြီး ကလေး တစ်ယောက်ပဲ ယူစေ၊ အဓမ္မလုပ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဖျက်ဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ပေးတယ်။ အဲဒါကိုတောင် နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာက လူမျိုးတစ်မျိုးထဲအတွက် ၂၀၀၈ အခြေခံ ဥပဒေ နဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး အမိန့်ထုတ်လေတော့ ဥပဒေ နားလည် တဲ့ ဒေါ်စု က မနေသာ တော့ဘူးပေါ့။ ရိုဟင်ဂျာ တွေကို ကလေး နှစ်ယောက်ပဲ ယူစေ၊ လို့ ပြောပြီး ကလေးဖျက်ချခွင့် ဥပဒေ နဲ့ ကလေးဖျက်ချဖို့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုမျိုး အစီအမံတွေ မလုပ်ထားရင် ဘယ်လို ဖြစ်လာမလဲ။ မြန်မာပြည်က ကျောင်းတွေမှာ လိင်ပညာပေးမှုတွေကော အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား။
အဲဒီ အမိန့်ရဲ့ နောက်ကွယ်က လိုက်လုပ်ရမဲ့ တာဝန်တွေက မနဲလှပါ။ နိုင်ငံတော် အနေနဲ့ စနစ်တကျ ဘက်ဂျက်ကော ဆွဲထားပြီလား၊ ဥပဒေ ကော လွတ်တော်မှာ တရားဝင် ဖြစ်ပြီလား။ ကလေးဖျက်ချ ရင် ရာဇ၀တ်မှု မြောက်တဲ့ ဥပဒေ ကိုရော ဖျက်သိမ်းပြီလား။ ????